အိုင်ယာလန်တွင်လီမိတက် - လီမိတက်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Million Makers အိုင်ယာလန်သည်အိုင်ယာလန်နှင့် 109 နိုင်ငံများအတွက်ဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုပေးသည်။
အိုင်ယာလန်တွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်မှကမ်းလွန်တည်နေရာများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
အိုင်ယာလန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်း၌ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
အိုင်ယာလန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖြေရှာမှုများ၊ အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်အတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ အိုင်ယာလန်အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ အိုင်ယာလန်အတွက် Virtual နံပါတ်၊ အိုင်ယာလန်အတွက် CRM Solutions၊ အိုင်ယာလန်အတွက်ရုံးခွဲ၊ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
အိုင်ယာလန်၏အတ္တလန္တိတ်ကမ်းရိုးတန်း၏တောက်ပသောရှုခင်းသည်မိုင် ၂,၀၀၀ အကျယ်ရှိသောပင်လယ်အကျယ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရပြီးပထဝီအနေအထားအရအသားအရောင်ခွဲခြားမှုကအစဉ်အဆက်အစောပိုင်းကဘာသာစကားများနှင့်ချိတ်ဆက်လာသည့်ကြွယ်ဝသောဘဝလမ်းစဉ်နှင့်စည်းဝေးကြီးကိုတည်ဆောက်ရန်အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ အလွန်များပြားသောမိုးရေများဖြင့်လျှော်ထုတ်ထားသောတိုင်းပြည်၏မရှောင်ရှားနိုင်သောလယ်ကွင်းများသည်အစိမ်းရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုထားသည့်မြမြကျွန်းစုအတွက်အဖြေပေးသည်။ ထို့အပြင်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသည်ဒဏ္Patrickာရီများပေါများမှုအတွက်ရွှေရောင်ဖုံးအုပ်ထားသောရွှေအိုးများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဇာတ်လမ်းများမှသည်မြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သောပက်ထရစ်အထိသူ၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောမြွေကျွန်းကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနှင့်သုံးချောင်းသုံးချောင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူယူဆထားသည်။ ခရစ်ယာန်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူအဘို့ပုံရိပ်အဖြစ် shamrock ။ သို့သော်အိုင်ယာလန်ကိုချစ်စရာကောင်းသောမြေဟုလူအများကထပ်မံယူမှတ်ကြသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သမ္မတနိုင်ငံသည်အမြဲတမ်းစိုးရိမ်မှုများဖြင့်ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း၊ လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးလက္ခဏာများနှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်နှင့်အတူမိသားစုဝင်များ (အိုင်ယာလန်၏နယ်မြေ ၃၂ ခု၏နယ်မြေ ၆၂ ခုနှင့်အတူ) ကိုအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ Ulster ၏ UK) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနေဖို့။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏တရားဝင်ဘာသာစကားများမှာအင်္ဂလိပ်နှင့်အိုင်းရစ်ဘာသာစကားများဖြစ်သည်။ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူ ဦး ရေသည် ၄.၈ သန်းမျှရှိပြီးကျန်သူတို့၏ထက်ဝက်မှာအသက် ၃၅ နှစ်အောက်များဖြစ်သည်။ ကြီးစိုးငယ်ရွယ်သောအလုပ်စွမ်းအားသည်အရည်အချင်းရှိပြီးစွယ်စုံဖြင့်၊ အသက် ၃၀ နှင့် ၃၄ နှစ်ကြားရှိအိုင်းရစ်လူမျိုးတစ်ဝက်ကျော်သည်တတိယအဆင့်ဘွဲ့ရှိသည် - အီးယူရှိအခြားနိုင်ငံများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဤသည်မှာအိုင်ယာလန်ကိုပါရမီရှင်များအလုပ်လက်လှမ်းမီမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းအခြေအနေတွင်ဖော်ပြနေသည်။
အိုင်ယာလန်သည်ဆေးဝါးနှင့်ဇီဝနည်းပညာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာ၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ၊ စီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စားသုံးသူထုတ်ကုန်များ၊ စက်မှုထုတ်ကုန်များ၊ ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်ဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများမှမြင့်မားသောလေးစားမှုတပ်ဆင်ခြင်း၊
နိုင်ငံသည်ယူရိုဇုန်တစ်ခုလုံးတွင်အနိမ့်ဆုံးစီးပွားရေးရှိသည့်အပြင်ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အရှင်းဆုံး ၁၀ နေရာတွင်အတူတကွ လက်တွဲ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ရိုးရှင်းစွာဖြင့်နိုင်ငံတကာတွင်ထိပ်ဆုံး ၂၀ ရှိသည်။
အိုင်ယာလန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IFI) သည်ငွေရေးကြေးရေးနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သည်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများအတွက်ဖုံးကွယ်ထားသောအကြောင်းပြချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်အိုင်ယာလန်ကျွန်းတစ်လွှားရှိတစ် ဦး ချင်းနှင့်ကွန်ယက်များအကြားအပေးအယူလုပ်ရန်ကြံစည်မှုများကိုအိုင်ယာလန်မှတစ်ဆင့်မျိုးချစ်စိတ်ရှိသူများနှင့်သမဂ္ဂများအကြားဆက်သွယ်ခြင်း၊
ဘက်ပေါင်းစုံနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်မျှဝေသူ
စိုက်ပျိုးရေး၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့်စားနပ်ရိက္ခာ ဦး စီးဌာနနှင့်စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် ဦး စီးဌာနသည်ဒိုဟာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ အိုင်ယာလန် Aid နှင့်အနီးကပ်လက်တွဲခဲ့ကြသည်။
အထူးသဖြင့်အိမ်ခြံမြေ ၀ ယ်ရန်မျှော်လင့်သူများအတွက်အိမ်ကုန်ကျစရိတ်မှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်းဇုန်တွင်အိမ်ကောင်းကောင်းရှိခြင်းကကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်စေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ သဘောတူခွင့်ပြုချက်သတင်းအချက်အလက်များကိုစီစဉ်ပေးသည့်မကြာသေးမီကလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာသည်လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်၏ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်မှ စ၍ ဒုတိယအကြိမ်တွင်သိသိသာသာမြင့်တက်လာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်ရှေ့တန်းတွင်တိုးတက်လာရန်စတင်နေပြီဖြစ်ရာရေရှည်တွင်အိမ်အသုံးစရိတ်များတိုးချဲ့ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသင့်သည်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အရင်းအနှီးစီးပွားရေးကဏ္sectorsများအတွက်ရှုထောင့်ကိုလည်း Basel II သို့ကူးပြောင်းခြင်းအပါအ ၀ င်လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်။ ဤအခက်အခဲများသည်အမှုဆောင်အရာရှိများသည်တည်ငြိမ်သောပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်အားကောင်းသောအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအစီအမံများပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်၏အရေးပါမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
အိုင်ယာလန်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဆန်းသစ်တီထွင်မှုစင်တာတစ်ခုအနေနှင့်တိုးတက်နေသည်။ ဒေသတွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကုမ္ပဏီများတွင် ဆက်လက်၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများရှိနေသည်။ လတ်တလောသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဖွဲ့အစည်းများမှရာထူး ၁၇,၅၀၀ ကျော်အားအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပြီးထိုဒေသသည်အများပြည်သူသုံးအခကြေးငွေ၏ ၄၀% ကိုတာဝန်ယူနိုင်သည်။
အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် - အိုင်ယာလန်ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကိုလည်းအဆုံးသတ်ရန်နှင့်အိုင်ယာလန်ရှိရုံးခန်းများဖြစ်သောအိုင်ယာလန်ရှိစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော HR ဖြေရှင်းချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုအိုင်ယာလန်တွင်ငှားရမ်းခြင်းအတွက်လည်းကူညီသည်။ အိုင်ယာလန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ၀ ယ်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်၏ virtual နံပါတ်၊ အိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အိုင်ယာလန်တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အိုင်ယာလန်ရှိစီးပွားရေးတန်ဖိုး၊ အိုင်ယာလန်ရှိ CRM Solutions၊ အိုင်ယာလန်ကုန်သည်အကောင့်သို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်ငွေပေးချေခြင်းတံခါးပေါက်၊ အိုင်ယာလန်ရှိအိုင်ပက်ဒ်အတွက်အိုင်ပီလ်ဖြေရှင်းမှု၊ အိုင်ယာလန်ရှိဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အိုင်ယာလန်ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အိုင်ယာလန်ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အိုင်ယာလန်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အိုင်ယာလန်တွင်ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အိုင်ယာလန်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊
အိုင်ယာလန်တွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - အိုင်ယာလန်နှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအပါအဝင်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးသတ်ဖြေရှင်းမှုများကိုပေးစွမ်းပြီး၊ အိုင်ယာလန်မှသင့်အားနေရာချခြင်းသို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများ၊ အိုင်ယာလန်ရှိကုန်သွယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိ virtual နံပါတ်များ၊ အိုင်ယာလန်တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အိုင်ယာလန်ရှိစီးပွားရေးအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အိုင်ယာလန်ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway အိုင်ယာလန်တွင်အိုင်ယာလန်တွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အိုင်ယာလန်တွင်လုပ်ကိုင်နေသောအရင်းအနှီးငွေကြေး၊ အိုင်ယာလန်တွင်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ အိုင်ယာလန်ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အိုင်ယာလန်တွင်အက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အိုင်ယာလန်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုဖို့အိုင်ယာလန်အတွက် Blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ စျေးနှုန်းများ။
အိုင်ယာလန်အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ | အိုင်ယာလန်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
"Million Makers မှာကျွန်တော်တို့အိုင်ယာလန်နဲ့ကမ္ဘာမှာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ယောက်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်အိုင်ယာလန်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ WE အိုင်ယာလန်အတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း အိုင်ယာလန် (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း အိုင်ယာလန် (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း အိုင်ယာလန်
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း အိုင်ယာလန်
အိုင်ယာလန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Merchant Account Ireland / Payment Gateway အိုင်ယာလန်
အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
●ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီအိုင်ယာလန် (၁ နှစ်) အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်ခ - $ 1
●အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ကျေးဇူးပြု၍ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီ TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ)
# အိုင်ယာလန်ရှိ Private Limited ကုမ္ပဏီအတွက်သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အရာရှိနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းခြင်း
●အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်စံပြအဖွဲ့လိုက်စာရွက်စာတမ်းများလည်းပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်အသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်စာရင်းမှတ်ပုံတင်များပါဝင်သည်။
အိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသရင်းမြစ်များနှင့်နီးစပ်ရာအခမဲ့သင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသည်။ အကယ်၍ သင်အိုင်ယာလန်သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Private Limited ကုမ္ပဏီအိုင်ယာလန်အတွက်ကုန်သည်စာရင်း
Private Limited ကုမ္ပဏီအိုင်ယာလန်အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်အိုင်ယာလန်၌တည်၏
သင်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုပါကအိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အိုင်ယာလန်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်အိုင်ယာလန်တွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ အိုင်ယာလန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့်အိုင်ယာလန်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ယာလန်တွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်အိုင်ယာလန်မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီပေးပါမည်။ အိုင်ယာလန်၊ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်၊ သင်နှင့်သင်တို့၏မိသားစုအတွက်အိုင်ယာလန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါကအိုင်ယာလန်နိုင်ငံအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သောကျွမ်းကျင်သည့်အကူအညီများပါ ၀ င်သည်။ အဘို့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
အိုင်ယာလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ အိုင်ယာလန် ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် အိုင်ယာလန်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ယာလန်၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်အိုင်ယာလန်တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ အိုင်ယာလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေးအတိုင်ပင်ခံများနှင့်အိုင်ယာလန်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုအရေးကြီးစေသည်။
အိုင်ယာလန်၌ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း - LTD အိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုအိုင်ယာလန်အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မျှပင်ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ယာလန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးတိုင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိအိုင်ယာလန် / LTD မှပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
အိုင်ယာလန်အတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
အိုင်ယာလန်ရှိအိုင်ယာလန် / လီတာရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီအတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်စာတမ်းများ။
အိုင်ယာလန်ရှိ LTD လီမိတက်ရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စာအုပ်။
အိုင်ယာလန်ရှိအိုင်ယာလန် / LTD တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ပါကမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရုံး၊ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါကအိုင်ယာလန်ရှိအိုင်တီ / လီမိတက်ရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိအိုင်ယာလန် / LTD တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ အိုင်ယာလန်ရှိအိုင်ယာလန်၊ လီမိတက်ရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ -
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: အကယ်၍ သင်သည်အိုင်ယာလန်တွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မပါဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုချက်ပေးသောအိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အိုင်ယာလန်တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်ကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိကုန်သွယ်မှု / အရောင်းအ ၀ ယ်၊ အိုင်ယာလန်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိငွေကြေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်အခြားအာမခံလုပ်ငန်းများ၊ အိုင်ယာလန်ရှိငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ အိုင်ယာလန်မှာလဲလှယ်, အိုင်ယာလန်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုံခြုံချုပ်နှောင်ထားန်ဆောင်မှု။
အိုင်ယာလန်ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်တွင်လောင်းကစားလိုင်စင်ချထားရန်အတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
အိုင်ယာလန်နှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပြည်နယ် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောအိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်သာမကအိုင်ယာလန်ရှိ Professional CFA၊ အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၊ အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ယာလန်ရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ပေးဆောင်သူများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အိုင်ယာလန်တွင်အလွန်ကြီးမားသည့်အစုစုကိုစီမံသည်။
အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့ရှိဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
အိုင်ယာလန်ရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ Dublin ရှိ Corporate Services
အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အိုင်ယာလန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အိုင်ယာလန်ရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အိုင်ယာလန်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အိုင်ယာလန်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အိုင်ယာလန်ရှိအိုင်ယာလန်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အိုင်ယာလန်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အိုင်ယာလန်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံ အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အိုင်ယာလန်ရှိကော်ပိုရိတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်, အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အိုင်ယာလန်ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အိုင်ယာလန်ရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ
အိုင်ယာလန်အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | Dublin ရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
အိုင်ယာလန်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီအိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် အိုင်ယာလန်.
အိုင်ယာလန်အတွက် Accounts ကို Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအိုင်ယာလန်တွင်သင်အပ်နှံနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို အိုင်ယာလန်၌တည်၏။
HR အတိုင်ပင်ခံ အိုင်ယာလန်တွင်ပေးအပ်ထားသည့်သင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်သင်၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုဝန်ထုတ်နိုင်ပြီးအိုင်ယာလန်တွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ အိုင်ယာလန်တွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နှင့်အိုင်ယာလန်နှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းအိုင်ယာလန်၌တည်၏
အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ အိုင်ယာလန်.
အိုင်ယာလန်အတွက် Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်အိုင်ယာလန်ကနေ။
အိုင်ယာလန်အတွက် CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ အိုင်ယာလန်ရှိအခြားဖောက်သည်များအပါအ ၀ င်အိုင်ယာလန်ရှိသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - အိုင်ယာလန်အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် အိုင်ယာလန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်း VoIP အပါအဝင်အိုင်ယာလန်ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းနည်းများအိုင်ယာလန်ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း အိုင်ယာလန် အိုင်ယာလန်တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အိုင်ယာလန်, အိုင်ယာလန်တွင် CryptoCurrency ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အိုင်ယာလန်တွင်အက်ပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသော software ကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်တည်ဆောက်သည် အိုင်ယာလန်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်အမြန်ဆုံးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အိုင်ယာလန်တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည့်အိုင်ယာလန်၏တိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေနေသည့်တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည် ဦး စားပေးသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်၊ အိုင်ယာလန်၌သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်၎င်းကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာပြောကြားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ယာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်အိုင်ယာလန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ အိုင်ယာလန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်အိုင်ယာလန်တွင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအိုင်ယာလန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အိုင်ယာလန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သည် အိုင်ယာလန်တွင်လီမိတက်ပေါင်းစည်းခြင်း | အိုင်ယာလန်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း | အိုင်ယာလန်တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | အိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
အိုင်ယာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်အိုင်ယာလန်တွင် LTD ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းအိုင်ယာလန်တွင် LTD မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်လီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကမ်းလွန် LTD ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကမ်းလွန်လီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ရှိသောကမ်းလွန် LTD မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , အိုင်ယာလန် LTD မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အိုင်ယာလန် LTD မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အိုင်ယာလန်လီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်, LTD ဖွဲ့စည်းရေး, အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်, LTD မှတ်ပုံတင်။
အိုင်ယာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်အိုင်ယာလန်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းအိုင်ယာလန်၌ LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင် LLC တည်ထောင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ရှိသောကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ , အိုင်ယာလန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, အိုင်ယာလန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အိုင်ယာလန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အိုင်ယာလန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူရှိသောအိုင်ယာလန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအိုင်ယာလန်ကုမ္ပဏီ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအိုင်ယာလန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအိုင်ယာလန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအိုင်ယာလန်ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအိုင်ယာလန်ကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အိုင်ယာလန်ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများကိုအိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အိုင်ယာလန်၌ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်။ | LTD တွင်အိုင်ယာလန်၌မှတ်ပုံတင်ပါ အိုင်ယာလန်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ရန် အိုင်ယာလန်တွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်အထောက်အကူများမှာ - Dublin ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dublin ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dublin မှ Offshore ကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Dublin မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Dublin မှ Offshore ကုမ္ပဏီများအားမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
အိုင်ယာလန်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်း | Dublin အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအိုင်ယာလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်။ Dublin မြို့ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၊ Dublin ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်အောင်မြင်သည်။ , Dublin ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Dublin ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Dublin ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Dublin ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
အိုင်ယာလန်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ Dublin ၌အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အိုင်ယာလန်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ အိုင်ယာလန်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွေ၊ အိုင်ယာလန်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းလူသိများတဲ့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာစျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှု ၀ န်ဆောင်မှုတွေပေးတဲ့ကုမ္ပဏီ၊ Dublin ရှိဝန်ဆောင်မှုများ၊ Dublin ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Dublin ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Dublin ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
အိုင်ယာလန်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Dublin ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ
အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Dublin ၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ၊ Dublin ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ပါ၊ Dublin တွင် setup ကုမ္ပဏီ၊ Dublin ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ၊ Dublin ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ Dublin ရှိတန်ဖိုးနည်းကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဝန်ဆောင်မှု
အိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ Dublin ရှိနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Dublin ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုအိုင်ယာလန် | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ Dublin
အိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စရိတ်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျမှုအိုင်ယာလန်တွင်ကုန်ကျသည်။
စျေးသက်သာသောအိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Dublin ရှိစျေးသက်သာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
အိုင်ယာလန်တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) အိုင်ယာလန်တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့တည်ထောင်နိုင်မည်နည်း။
အိုင်ယာလန်တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် (သို့မဟုတ်) အိုင်ယာလန်တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) အိုင်ယာလန်တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အိုင်ယာလန်တွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
အိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Dublin ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်း
အိုင်ယာလန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသလား အိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း အိုင်ယာလန်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း အိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဟုတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ယာလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်အိုင်ယာလန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့နှင့်အတူနေထိုင်သူများကိုထောက်ခံသည်။ Formation, အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်အိုင်ယာလန်နှင့်အိုင်ယာလန်လီမိတက်နှင့်အတူနေထိုင်သူမဟုတ်သူများ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်ရှိသောကမ်းလွန်, LTD အိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, LTD အိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အိုင်ယာလန်, LTD တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၊dနှင့်လည်းအိုင်ယာလန်နှင့်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများနှင့်အိုင်ယာလန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကမ်းလွန် LLC ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်အိုင်ယာလန်တွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်နှင့်အိုင်ယာလန်တွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိုင်ယာလန်တွင်အိုင်စီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ရှိအိုင်စီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအိုင်ယာလန်တွင်အိုင်ဘီအိုင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအိုင်ယာလန်တွင်အိုင်ဘီအိုင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း, အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်ရှိသောအိုင်စီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်အိုင်စီတီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်အိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အိုင်ယာလန်နှင့်အိုင်ယာလန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများနှင့်မနေထိုင်သူများ။ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စီးပွားရေး C အိုင်ယာလန်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အိုင်ယာလန်၌။
အိုင်ယာလန်တွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် Incorporate LTD အိုင်ယာလန်၌ထည့်သွင်း LLC အိုင်ယာလန်တွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ အိုင်ယာလန်၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး
အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း (သို့) အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းတို့အကြားကွာခြားမှုမရှိဟုသုံးစွဲသူများကမေးလေ့ရှိသောဤအခြေခံမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အတွက်၎င်းတို့သည်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုပေါင်းစပ်သောကုမ္ပဏီအတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံးများဖြစ်သည်။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ အိုင်ယာလန်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ
အဘယ်ကြောင့်အိုင်ယာလန်တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသုံးရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများနှင့်အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များဟုလူသိများသောအရည်အသွေးမြင့်ကုမ္ပဏီစာရင်းကိုင်များကြောင့်အကောင်းဆုံးသောနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ အိုင်ယာလန်နှင့်အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကသင့်အားအိုင်ယာလန်၌စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
အိုင်ယာလန်၌ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာစာရင်းကိုင်များ အိုင်ယာလန်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်
နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အိုင်ယာလန်တွင်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
Dublin ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးကူညီပံ့ပိုးသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအိုင်ယာလန်မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) အိုင်ယာလန်တွင်တည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကအိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အိုင်ယာလန်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။ ထိုနည်းတူစွာအိုင်ယာလန်တွင်လည်း၊ Dublin ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Dublin ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန် (သို့) Dublin ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Dublin ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ သို့မဟုတ် Dublin ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Dublin ။
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Dublin ရှိစျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်န်ဆောင်မှု
http://www.gov.ie - အစိုးရဌာနများ
http://www.merrionstreet.ie - Merrion လမ်း
http://implementationbody.gov.ie - အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့
http://www.decentralisation.gov.ie - ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး
http://www.pensionsboard.ie - ပင်စင်ဘုတ်အဖွဲ့
http://www.pensionsombudsman.ie - ပင်စင်လစာ Ombudsman ရုံး
http://www.citizensinformation.ie - နိုင်ငံသားသတင်းအချက်အလက်
http://www.publicjobs.ie - အများပိုင်အလုပ်များ
http://www.cspensions.gov.ie - Pension Modeller အပါအဝင်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပင်စင်လစာ
http://www.welfare.ie - လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဦး စီးဌာန
http://www.sps.gov.ie/en/ - အကြီးတန်းပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
http://www.eupan.eu/ - ဥရောပပြည်သူ့အုပ်ချုပ်မှုကွန်ယက်
http://www.cseas.per.gov.ie - ပြည်သူ့ ၀ န်ထမ်း ၀ န်ထမ်းများ A ကူ A ညီပေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
http://circulars.gov.ie/ - မြို့ပတ်ရထား
http://www.finance.gov.ie - ဘဏ္Departmentာရေးဌာန
http://peoplepoint.gov.ie/ - HR & Pension Administration Shared Service Centre
http://pssc.gov.ie/ - PSSC - လုပ်ခလစာမျှဝေသည့်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ
http://govacc.per.gov.ie/ - အစိုးရစာရင်းကိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
Destination အိုင်ယာလန် - ခရီးသွားလာရေးနှင့် Gu ည့်လမ်းညွှန်များ
Bordo Fáilte - အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှကြိုဆိုပါတယ်
အိုင်ယာလန်အနောက်မြောက် & Lakelands
အဆိုပါ Boyne ၏ကွေး၏ရှေးဟောင်းသုတေသန Ensemble (Brú na Bóinne Complex)
အိုင်ယာလန်၏ Dublin- အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
ဂျိမ်း Joyce စင်တာ
အိုင်းရစ် Times သတင်းစာ
Citibank ဥရောပ https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/ireland.html
DePfa ဘဏ် https://www.depfa.com/
Elavon ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှု https://www.elavon.com/company/about-elavon.html
Intesa Sanpaolo ဘဏ်အိုင်ယာလန် http://www.intesasanpaolobankireland.ie/
JP Morgan ဘဏ် (အိုင်ယာလန်) https://www.jpmorgan.com/IE/en/about-us
KBC ဘဏ်အိုင်ယာလန် https://www.kbc.ie/
Macquarie ဘဏ် https://www.macquarie.com/in/en.html
အမြဲတမ်း tsb https://www.permanenttsb.ie/
Scotiabank (အိုင်ယာလန်) https://www.scotiabank.com/global/en/country/ireland.html
UniCredit ဘဏ်အိုင်ယာလန် https://unicreditbank.ie/
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အိုင်ယာလန်ရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ အိုင်ယာလန် အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
# အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ လက်နက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသို့ (သို့) အိုင်ယာလန်သို့ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်သို့လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်အိုင်ယာလန်သို့ (သို့) သို့ ၀ င်ရောက်သောစက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးမှုမရှိပါ။
# အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (သို့) အိုင်ယာလန်ဥပဒေအရလူမည်းစာရင်းသွင်းထားသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအိုင်ယာလန်မှာရှိတဲ့၊ သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီတွေကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါဘူး။
●အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနဲ့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံထဲမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဓာတုပစ္စည်းများကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှ (သို့) အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူ၊ တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုဖြစ်စေ၊
●အငြင်းပွားဖွယ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသို့ (သို့) ၀ င ်၍ လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်မွေးစားခြင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
# အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုအိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊
●အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Pyramid အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသောအိုင်ယာလန်ရှိတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●အိုင်ယာလန်အတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းပစ္စယများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောအိုင်ယာလန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် အိုင်ယာလန်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် အိုင်ယာလန်, အိုင်ယာလန် ဘဏ်အကောင့်, အိုင်ယာလန် ယုံကြည်မှု အိုင်ယာလန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု အိုင်ယာလန်။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ အိုင်ယာလန်အတွက်
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-ireland/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-ireland/